आजको खबर – १७३
१) सन् १९९२ मा सगरमाथा आरोहणको प्रयास गरेवापत स्वर्ण पदक पाउने ब्रिटिस गोर्खा राईफल्सका सैनिक(नेपाली नागरिक) को हुन् ? तेजवीर वुुरा
२) तेजवीर वुराले प्राप्त गरेको ओलम्पिक स्वर्ण पदक कहाँ राखिएको छ ? गोर्खा संग्रहालय (वेलायत)
(स्रोत ः कान्तिपुर दैनिक २०७३÷४÷२७)
३) नेपालले शीतकालिन ओलम्पिकमा कहिलेदेखि सहभागिता जनाउन थालेको हो ? सन् २००२ बाट
४) “बिजुली मेसिन” के हो ? विज्ञानको कथावस्तुमा आधारित फिक्सन फिल्म
५) “इरोम शर्मिला” को हुन् ? विश्वकै लामो भोक हड्ताल गर्ने भारतीय महिला
६) “शेयरबाट करोडपति” पुस्तक कसले लेखेका हुन् ? शेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई
७) इटाली सरकारले प्रदान गर्ने “नाइट अफ द अर्डर अफ द स्टार अफ इटाली अवार्ड २०१६” बाट कुन पर्यटन व्यवसायी सम्मानित भएका छन् ? निमानुरु शेर्पा
८) उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कानून कुन हो ? उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४
९) संयुक्त राष्ट्रसंघले सबैका लागि दिगो ऊर्जाको व्यवस्था कहिलेसम्म गरिसक्ने घोषणा गरेको छ ? सन् २०३०
१०) ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा जारी ओलम्पिकमा १० सुन्न लायक राष्ट्रिय गान छनौट गरिएका मध्ये नेपालको राष्ट्रिय गान कति औं नम्बरमा परेको छ ? तेस्रो
११) रियो ओलम्पिकमा नेपालको राष्ट्रिय गानलाई कुन थीममा व्याख्या गरिएको छ ? “वी आर हन्ड्रेड्स अफ फ्लावर्स”
1 विश्वको जनसंख्या
2 Career News and Info वैशाख १४, २०७४
3 नेपालको परराष्ट्र नीतिका सिद्धान्तहरु
4 Kharidar Model Exam Set - 1
6 वित्तीय साक्षरता
7 आजको खबर–१७
8 नइ प्रकाशनका पुरस्कार नौ जनालाई
10 Career News and Info असार २३, २०७४